Apple yakagadzirisazve pfungwa yemumhanzi epamba neiyo HomePod | Ndinobva mac
Apple yakagadzirisazve pfungwa yemumhanzi epamba neiyo HomePod
Apple inodzoka kune nyika yevatauri ne HomePod, mutsivi wengano iPod Hi-Fi, mutauri anouya akatakura nhau uye izvo zvine hukama ne apuro Mimhanzi neApple zvishandiso zvinoshamisa. Icho mutauri uyo anokwanisa kugadzira nzvimbo dzakasiyana nekudzora iko kunonoka kwemasaisai ezwi, muchidimbu, kubudirira kutsva kweApple.
Kana iri dhizaini yatinayo kuti yakafanana chaizvo neMac Pro asi yakakomberedzwa nemesh. Ichatengeswa nemaviri mavara, nhema uye chena uye pamusoro iine chikamu chinochinja umo unogona kuona mufananidzo weSiri mubatsiri icon mukufamba.
Uyu mutauri mutsva haana chimwezve uye hapana chakaderera pane nomwe mutauri tweeters uye hombe subwoofer inodzora zvese izvi neA8 chip inoita kuti kutonga kwemafungu ekuteerera kuite yakasarudzika muchikamu chayo.
Iyo ine mamaikorofoni matanhatu akaikomberedza kukumbira Siri, saka kugona kwayo kuburikidza nemubatsiri wechiratidzo izere. Iye zvino akawanda mamwe mabatanidzwa neSiri anogona kurairwa kubva kuPambaPod uye ndizvo chaizvo zvinoita kuti ive yakakosha. Iyo HomePod inogona zvakare kushandiswa semubatsiri wemba uye ichave ichikwanisa kukuudza iwe nhau, kuti traffic iri sei, maalarm, mameseji, nezvimwe. Uye kana iwe zvakare uine HomeKit, HomePod inodzora iwo madhivha.
Mutengo waro wekutengesa uchave madhora mazana matatu nemakumi mana nemapfumbamwes uye ichatanga kutengeswa muna Zvita muUnited States, United Kingdom neAustralia. Spain inogara kwechipiri kutumira kwenyika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Apple yakagadzirisazve pfungwa yemumhanzi epamba neiyo HomePod
César Vílchez akadaro
Zvakanaka, sezvazvinonzwika se "zvakanaka" seye ipod HiFi, ivo vachabudirira pane zvishoma!
Pindura kuna César Vílchez
Yakanaka kwazvo Post ... sevaya vese vaunotsikisa ... Makorokoto ....
Apple inotangisa zviziviso zviviri zveiyo nyowani iPad Pro
Iyo 10,5 iPad Pro inosvika pamwe nekuvandudza kukuru